သောင်ပြင်ပေါ် နှာခေါင်းထိုးတင်မိပါတယ်ဆိုမှ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေက ထူထူထပ်လွန်း
၀ှက်စရာမလိုတဲ့ လက်သည်းတွေဆိုပါမှ ၀ှက်စာတွေက များများနိုင်လွန်း
ရင်းထောင်ထောင် ပြောင်၊ ရင်းထောင်လှဲ မွဲလို့ဆိုကြတာပဲ
ထောင်တုန်းကလည်း မပြောင်ခဲ့ရပါဘဲ လှဲတော့မှ မွဲချက်ကရက်စက်တယ်ကွာ
ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နွေလုံးလုံး ထညက်(ထန်းလျက်)ချက်နေတာ မင်းသိမှာပေါ့
အဲဒီထညက်(ထန်းလျက်)တွေအားလုံး ငါ အရက်ချက်ပစ်လိုက်ပြီကွာ
Posted by ညိမ်းညို at 22:583comments
ခရစ်စမတ်ဟာ န-နာရီ ခရစ်စမတ်ဟာ စမျဉ်း ငါစင်းစင်းကြီးသေရတော့မယ်
န-နာရီမှာ စမျဉ်းကို ဖြတ်နိုင်အောင် ဖြတ်ရလိမ့်မယ်
မဟုတ်ရင် ဗုံးမိုးတွေတ၀ုန်းဝုန်းရွာကျ ငါတို့သေကြလိမ့်မယ်
အဲသလို စစ်နည်းဗျူဟာကဆိုတယ် (ငါလည်း သင်အံလေ့ကျက်ခဲ့တာပါပဲ)
ခရစ်စမတ်ဟာ န-နာရီ ခရစ်စမတ်ဟာစမျဉ်း(ရှင်းရှင်းကြီး သိနေပြီ)
ဒါလည်း န-နာရီမှာ စမျဉ်းကိုမဖြတ်ကျော်နိုင်ခဲ့ဘူး
ဟေးးအရူး လက်တွေ့ဘ၀ထဲထိဆွဲခေါ်မလာနိုင်တဲ့ ချစ်ခြင်းဆိုတာ စိတ်ကူးသက်သက်တွေပဲ
အပျက်အပျက်နဲ့ နှာခေါင်းသွေးထွက်တဲ့ထိထိုင်ကြည့်နေရတယ်ဆိုတာ (သောက်)ပုံမလာခြင်းသက်သက်ပဲ
- ခရစ်စမတ်အပြီးမှာ လူတစ်ယောက်ကို ဆက်သွယ်ခွင့်ရဖို့ လွယ်ကူမှာမဟုတ်တော့ဘူး(ရစေဦးတော့၊ အနေအထားတစ်ခုပြောင်းလဲသွားတော့မယ်) လို့ ဘ၀မှာ တခါလောက်ဖြစ်ဖြစ် တွေးကြည့်ခဲ့ဖို့ကောင်းတယ်။ အနည်းဆုံး အသက်ရှူရတာ ပေါ့ပါးမယ်လို့ အောက်မေ့မိတယ်။ တစ်ဖက်ကပြန်တွေးမိတော့ ဘာထူးမှာလဲလို့ စိတ်ဖြေသာရတယ်။ သေမှာကို ကြိုသိပြီးသားတောင်မှပဲ လူတွေဟာ သေမှုသေခင်းနဲ့ ကြုံရတဲ့အခါ အနည်းနဲ့အများ တုန်လှုပ်တတ်ကြသေးတာပဲ။ ချစ်သူနဲ့ ကွေကွင်းရမယ်လို့ ကြိုသိခဲ့တယ်ထားဦး၊ ငါရော မတုန်လှုပ်ဘဲ နေမှာတဲ့လား။ ဘာရယ် မဟုတ်ဘူး။ ကဗျာကို နင်းတုံးလုပ်ပြီး အပူတွင်းကြီးထဲကနေ ငါခုန်ထွက်ကြည့်နေတာ။ ကဗျာတွေအပေါ် ငါ ဒီလို သစ္စာမဲ့ခဲ့ပေါ့။
Posted by ညိမ်းညို at 00:386comments
ကျနော်ဟာ ရူးသွပ်စွာ(သို့) မိုက်မဲစွာ အစွဲအလမ်းငရဲမှာ နေထိုင်သူ
သရက်ကင်းကြွေ ကောက်ချင်တယ်လို့ ပြောတော့ တစ်လောကလုံးက ရီတယ်။ မိုးမှောင်ကြီးကျသွားအောင် ရီကြတယ်။ ကျနော်ရှက်လိုက်တာဗျာတဲ့။ အနင်းခံလိုက်ရလို့ အိခနဲအသံထွက်သွားတဲ့ သစ်ရွက်ခြောက်လေးက ဆိုတယ်။ နေရောင်နဲ့ ကော့လန်နေအောင် ခြောက်သွေ့ခဲ့ရပြီးမှ မိုးလေးခပ်စွေစွေထပ်ထိတယ်။ ခမျာ ပျော့ဖလတ်ဖြစ်နေရှာတော့ အနင်းခံရတာတောင် ဂျိုးဂျိုးဂျွတ်ဂျွတ် အသံမထွက်တော့ဘူး။ အိခနဲ။ သူ့အပေါ် ဖိသတ်နင်းချေချလိုက်တာတောင်မှပဲ အိခနဲ။ သစ်ရွက်ခြောက်လေးဟာ တွန့်မွပြားကပ်သွားတယ်။ ကွယ်... ကျိုးကြေလိုက်ပါတော့လား။ ကျွတ်ဆတ်တောင့်တင်းနေတဲ့ စိတ်အခံမျိုးနဲ့ ကျိုးကြေသွားလိုက်ပါတော့လား။
မြေပြင်ပေါ်မယ် ဒီလို ညှိုးနွမ်းတွယ်ကပ်နေရတဲ့ဘ၀မျိုးကို ငါပျော်တယ်ထင်လို့လားကွယ်။
မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ရဲ့ သိပ်မဝေးလံလှတဲ့ အစွန်ကလေးမှာ
ချစ်တယ်လို့ပြောဖို့မလိုပါဘဲ အိမ်ကလေးထဲမှာ အချစ်နတ်သားလေးဟာ ဟိုသည်ပြေးလွှား...
ကျနော်ဆိုနေတဲ့ သီချင်းတစ်ပိုဒ်၊ သူ ညည်းနေတဲ့ တေးတစ်စ
ပေါင်းလိုက်တော့ သံစုံတီးဝိုင်းကြီး ဖြစ်သွားတယ်။
ကျနော့်မှာရှိတဲ့ အခက်အခဲများ၊ သူ့မှာရှိတဲ့ အခက်အခဲများ
ပေါင်းလိုက်တော့ သစ္စာပန်းတွေ ဖြစ်သွားတယ်။
ကျနော့်မှာရှိတဲ့ အားနည်းချက်တချို့၊ သူ့မှာရှိတဲ့ အားနည်းချက်တစ်ချို့
ပေါင်းလိုက်တော့ ဖေးမစာနာမှု ဖြစ်သွားတယ်။
ကျနော့်မှာရှိတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခု၊ သူ့မှာရှိတဲ့ အိပ်မက်တစ်ခု
ပေါင်းလိုက်တော့ နားလည်မှု ဖြစ်သွားတယ်။
ကျနော့်မှာရှိတဲ့ မိသားတစ်စု၊ သူ့မှာရှိတဲ့ မိသားတစ်စု
ပေါင်းလိုက်တော့ မေတ္တာဂေဟာကြီး ဖြစ်သွားတယ်။
ကျနော့်မှာရှိတဲ့ ညည်ဆိုးတချို့၊ သူ့မှာရှိတဲ့ သည်းခံစိတ်နားဆွဲလေး
ပေါင်းလိုက်တော့ ငဲ့ညှာမှုပန်းတစ်ခင်း ဖြစ်သွားတယ်။
ကျနော့်မှာရှိတဲ့ အကြည်ဓာတ်နည်းနည်း၊ သူ့မှာရှိတဲ့ ဖြူစင်မှုအများအပြား
ပေါင်းလိုက်တော့ စကြာဝဠာကြီးကို ချစ်တတ်လာတယ်။
ကျနော်က ကူးခပ်နေတဲ့ ချောင်းကလေး၊ သူက စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်တစ်သွယ်
ပေါင်းလိုက်တော့ တံတားကြီးတစ်စင်း ဖြစ်သွားတယ်။
ကျနော်က တောက်လောင်တဲ့ နွေဆိုး၊ သူက စိမ်းမြတဲ့ ပင်ပျို
ပေါင်းလိုက်တော့ ဘ၀တစ်ခု ဖြစ်သွားတယ်
အဲဒီဘ၀လေးထဲမှာ ကျနော်တို့ ပျော်ပါတယ်။
အဲဒီကဗျာလေးကို ကျနော်က ရွတ်မှာပေါ့။ သူ့ရဲ့နားစည်နုနုလေးဆီ ကဗျာရွတ်သံတိုးဖွဖွနဲ့ ထိခတ်မယ်လေ။ ငွေသံကြေးသံမပါတဲ့ ရူးသွပ်မှုသက်သက်နဲ့ အဲဒီညနေခင်းလေးဟာ အဖြူရောင်ပါးပါးလေးခြယ်ထားတာပေါ့။ ဟင့်အင်း။ အဖြူရောင်ကို အလင်းမြမြလေးပက်ထားတော့ အဖြူရောင်ပါးပါးလေးလိုဖြစ်နေတာပေါ့။ တကယ်တော့ အယုတ်အလျော့ အတိုးအဆုတ်ကင်းလှတဲ့ အဖြူရောင်ညနေခင်းလှလှလေးတစ်ခုပေါ့။
မိုးဖွဲဖွဲလေးစွေပြီးတဲ့အခါ သူနဲ့ကျနော် ခြံထဲကသရက်ပင်ကြီးအောက် သရက်ကင်းကြွေ ထွက်ကောက်ကြမယ်လေ။ အမြဲတစေရှူးဖိနပ်စီးရလေ့ရှိတဲ့ အရပ်ဒေသကလာသူမို့ သူ့ခြေထောက်လေးတွေက ဖြူဖြူနုနုလေး ရှိနေပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်ကြိုဝယ်ထားပြီးဖြစ်တဲ့ ယင်းမာဖိနပ်ပါးလေးပေါ်က သူ့ခြေခုံဖောင်းဖောင်းမို့မို့လေးကို ကျနော် ငေးနေမိပါလိမ့်တယ်။ သူ့ရယ်သံကလေးမှာ သံသရာတဆုံးတဖျားထိ ကျနော်ဟာ မျောပါသွားပါလိမ့်မယ်။
သရက်ကင်းလေးတွေကြွေတာ ဘယ်လောက်တောင် ကြာပြီလဲကွယ်။ ကိုယ်ကြွေကျနေခဲ့တာဖြင့် ကြာပါပြီ။
ဒီအခွင့်လေးမှမရခဲ့တာကိုဖြင့် ငါသေရာပါရပါတော့မယ်လို့ ခြံလေးထဲမှာ တိုးတိတ်စွာ ကြေကွဲရတော့မယ်။
ကြွေကျတာကအစ ကျွန်တော်တို့ ရင်ထဲမှာနာပါတယ်
အဲလိုကဗျာတွေ နောက်မရေးပါနဲ့တော့လား ဘိုစိုင်းရေ။ သနားသဖြင့်...သနားသဖြင့်...၊ မင်းသူငယ်ချင်း မောင်ညိမ်းကို သနားသဖြင့်လို့သာ မှတ်လိုက်ပါတော့ကွယ်။
ps- သစ်ရွက်ခြောက်၊ ကိုယ်၊ ကျနော် ဇာတ်ကောင်အလွဲအမှားများ၊ ကံ ကတ္တားအထားအသို လွဲမှားပွစာကျဲမှုများကို တမင်မျက်စိနောက်အောင် လုပ်ကြံထားခြင်း မဟုတ်ရပါကြောင်းနှင့် သူ့အလိုလို လွဲမှားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။ နောက်တစ်ကြောင်းကား တင်ခဲ့ပြီးသောအပုဒ်တိုင်းတွင် 'ရယ်' ကို 'ရီ' ဟု တောက်လျှောက်စာလုံးပေါင်းလာခဲ့သော ကျနော့်ကို ဘေးမဲ့ပေးကြပါကုန်ဟုသာ..။
Posted by ညိမ်းညို at 20:184comments
Posted by ညိမ်းညို at 00:275comments
တစ်ခါ တင်ဖူးပါတယ်။ အခု တစ်ကြိမ်ပြန်တင်ပါတယ်။
ဘ၀အပေါ် အချိန်ရှိသရွေ့ ရူးနှမ်းနေမိတာပေါ့
ဘယ်တော့မှ လ ထွက်လေ့မရှိဘူးဆိုတာ
စားဝတ်နေမှုဆိုတဲ့ အရေးကြီး ၃ ပါး
အမေနဲ့ ငြင်းခုံခဲ့ရတဲ့ ညနေခင်းတွေမှာ
ဘယ်လောက်ပဲ အကြာကြီး ငြင်းခုံနေရပါစေ
ကျွန်တော့်ကို မုန့်ဟင်းခါးတွေ တ၀ကြီးဝယ်ကျွေးပြန်ရော
"ကဲ..မောင်အောင် မင်းအမေ့ကို ဘယ်လောက်ကြာအောင်ပွေ့ချီထားနိုင်သလဲ"
နားရွက်ကို တံတွေးအဆွတ်ခံနေရတယ် အမေ
ကျွန်တော်ကိုက သန္ဓေမကောင်းခဲ့တာလား အမေရယ်
ဒီကနေ့ ကျွန်တော့်အသက် နှစ်ဆယ့်သုံး
အမှားတွေကို ဘယ်လိုပဲ သင်ပုန်းချေခဲ့ချေခဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ သားလိမ္မာဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းအောက်မှာ
စိမ်းညှို့အုပ်မိုးနေတဲ့ မြို့ကလေးရဲ့ ခြံထောင့်တစ်နေရာ
အိမ်ပြေးတစ်ယောက်ရဲ့ အမေဟာ အဝေးကသားအတွက်
လက်ဖက်ပင်တွေက ပိုးကျနေပြန်ပြီကွယ် လို့ဆိုသတဲ့
မနက်ဖြန် သို့မဟုတ် ဘယ်သောအခါတော့
Posted by ညိမ်းညို at 11:474comments
လွမ်းလို့မှ အမှတ်တရပုံရိပ်လေးတွေကို ပွတ်သပ်မကြည့်ရဲ
Posted by ညိမ်းညို at 00:116comments
ဘယ်လိုမှ မတွေးသင့် မတွေးအပ်တော့ဘူးလို့
Posted by ညိမ်းညို at 00:102comments
ကျွန်တော် တက်ဂ်ဂိမ်းတွေနဲ့ စိမ်းခဲ့ပါတယ်။ တက်ဂ်စာရေးဖို့လည်း တစ်ကြိမ်မက ပျက်ကွက်ခဲ့မိပါတယ်။ ဒီအတွက် ခင်မင်ရင်းနှီးစွာ တက်ဂ်ခဲ့ကြတဲ့ ညီအကိုမောင်နှမတွေကို အလေးအနက် တောင်းပန်ပါတယ်။ အကိုကြီးကိုတင်မင်းထက်ရဲ့ ပထမကဗျာ တက်ဂ်ဂိမ်းအတွက် ဒီကဗျာလေးကို ကျနော် တင်ပါတယ်။ ပထမဆုံးရေးဖြစ်တဲ့ ကဗျာလားဆိုရင်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ကဗျာကို တခြားလူတွေဖတ်စေဖို့ ဘုတ်ပေါ်စတင်တာဆိုရင်တော့ ဒါ ပထမဆုံးကဗျာ ဟုတ်ပါတယ်။ ပထမနှစ် တပ်ရင်းနံရံကပ်စာစောင်မှာ တင်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ပထမဆုံးကဗျာကို မှတ်မှတ်ရရ ပြန်တင်ဖြစ်အောင် သတိတရတက်ဂ်ပေးတဲ့ ကိုတင်မင်းထက်ကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လှမ်းလို့ ဖြင့် လာခဲ့စေချင်။
Posted by ညိမ်းညို at 21:564comments
ဟန်တွေက “ဟမ်”ဆိုပြီးရင်သပ်ရှုမောစရာကောင်းလောက်အောင် ဟန်ဆောင်ပြီးဟန်လုပ်နေကြ “ဟမ်”
ဒါ ငါ့ဆန်ကောပဲ ငါတကောကောရင်း အလှေးအမွှားများ ခါထုတ်
ငါ ငြိမ်ငြိမ်လေး ပြန်ကုပ်
ငါ့ခလေးဟာငါ့ခလေးပဲပေါ့ သူ့ခလေးကို လက်သွားဆွဲတော့ ပျော့ပြဲထွက်သွားမယ်
ဟန် ဟန် ဟန်ဓာတ်ခုတ်တော့ အံကပ်ပြုတ်တာပေါ့
ရာသီစာတွေက ရာသီတစ်ရာသီစာမှာ ရောင်းအားကောင်း
သမာဓိချိန်ခွင်ကြီးများ အိနြေ္ဒရရ လျှာထုတ်ပြသောမပြသော။
ကဗျာကဗျာ ကဗျာကယာရေးပြီး ကဗျာကသီလွှတ်တင်
ယုံ ရင် ကြည် လိုက်ပေါ့
Posted by ညိမ်းညို at 15:033comments
ဘာမှမရှိတဲ့ နံရံဖြူဖြူကိုကြည့်ပြီး ဘာမှန်းသတိတဲ့စာလုံးတွေကို တတွတ်တွတ်ရွတ်တယ်။ လေ၀င်လေထွက်နည်းတဲ့အခန်းမို့ ရှိရင်းစွဲလေထုက ဆောင်းရာသီဆိုတာကို ထပ်မံခြယ်သပြန်တယ်။ စိမ့်အေးမှုက နံရံတွေပေါ်ထိ တရွေ့ရွေ့ တွယ်တက်နေဟန်တူတယ်။ သူ ငေးစိုက်ကြည့်နေတဲ့ နံရံကလည်း သူ့ကို အေးစက်စက်ပြန်ကြည့်နေတယ်လို့ သူ့နားရွက်တွေက ပြောတယ်။ နားရွက်အောက်ပိုင်း အသားနုမှာ ပတ်ကြားအက်နေတာ စမ်းမိတယ်။ အခုဆို မြင့်နိုင်ကြီးလည်း ဘေးကင်းရာကို ရောက်နေမှာပဲ။ လွတ်ပါကျွတ်ပါစေကွာလို့ လူရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ မြင့်နိုင်အတွက် သူဆုတောင်းပေးဖူးတာ ပြန်သတိရတယ်။ သိပ်ရီရတဲ့ကောင်ကြီး။ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲတွေဖြေခါနီး အတူတူစုအိပ်ကြတုန်း မြင့်နိုင်က ၀မ်းသာအားရထပြောတယ်။ ငါတော့ “ဒီနှစ်သင်္ချာဂုဏ်ထူးထွက်မှာ သေချာတယ်၊ ဉာဏ်စမ်းတွေလည်း အကုန်တွက်ပြီးပြီ” တဲ့။ ဘယ်ဆရာရဲ့ ဉာဏ်စမ်းပုစ္ဆာတွေလည်းဆိုတော့ ငါ့ဘာသာလှည့်ထားတာလေကွာတဲ့။ မြင့်နိုင်ကြီး တော်တော်ရီရတယ်။ အခု သူက ပိုရီစရာကောင်းနေပြီ။ သူကိုယ်တိုင် လှည့်ထားတာတောင် အဖြေမှန်အောင် မတွက်နိုင်သေးဘူး။ မြင့်နိုင်ကြီးလို ဂုဏ်ထူးထွက်မှာကွလို့လည်း ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်(ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လှည့်စားပြီးဖြစ်စေ၊ နှစ်သိမ့်ပြီးဖြစ်စေ) မကြွေးကြော်နိုင်သေးဘူး။ အမှောင်ထဲ ဘာအရောင်ရှိလဲလို့ ညီလေးတစ်ယောက်ကမေးတော့ အချစ်ကို တခါပဲတွေ့လိုက်တယ်၊ လွမ်းရတာမဆုံးတော့ဘူးလို့ သူက မဆီမဆိုင်ဖြေတယ်။ လေလွင့်နေတဲ့တိမ်တွေဆိုတာ ဒီလိုပါပဲ။ ဘယ်မှာရပ်မှာလဲလို့မေးရင် ငါမညောင်းသေးဘူးလို့ ဖြေလိမ့်မယ်။
နံရံကိုအပေါက်ဖောက်ပြီး စပါးတစ်ခင်း စိုက်ကြည့်တယ်။ တော်ပြီ။ အသားဖြူဖြူ မေးစိနှစ်ထပ်နဲ့ ၀၀ဖိုင့်ဖိုင့်ဆရာမကြီးကို ပြောလိုက်တော့မယ်။ ကျနော် ပေါင်မုန့်ညိုတွေမစားချင်တော့ဘူးလို့။ ဆန်ပြုတ်လေးပဲ ပြုတ်သောက်တော့မယ်၊ ကျနော့်စပါးခင်းလဲ ရွှေရောင်သန်းနေပါပြီလို့။ ဒီအခြေအနေမျိုးမှာ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရတာကလည်း သူ့စိတ်ကို နည်းနည်းတော့ ပေါ့ပါးစေတယ်။
လူတစ်ယောက်က သူ့ကိုရည်ရွယ်ပြီး ဂဏန်း ၁၁ လုံးနှိပ်လိုက်မှ စကားပြောခွင့်ရတဲ့ကိရိယာကို ဖုန်းလို့ခေါ်တယ်။ (ခေါ်နိုင်မယ် ထင်တာပဲ၊ သူ့ကိုရည်ရွယ်ပြီး ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ဂဏာန်း၁၁ လုံးကိုမနှိပ်ခဲ့တော့ ယတိပြတ်ပြောဖို့ မ၀ံ့ရဲစရာပေပဲ)။ သူက လူတစ်ယောက်ကိုရည်ရွယ်ပြီး ဂဏာန်း၁၁ လုံးနှိပ်ရင်တောင် စကားပြောခွင့်ရဖို့ခက်ခဲတဲ့ ကိရိယာတစ်မျိုးလည်း ဖြစ်တယ်။ ဘာဖန်ရှင်မှ မယ်မယ်ရရမပါတဲ့ ဒီဖုန်းက နှိုးစက်ပေးထားရင်တော့ သူ မထမချင်း အော်ဟစ်နေတတ်တယ်။ ဒီအခန်းဖြူဖြူ (နံရံဖြူဖြူ၊ စောင်ဖြူဖြူ၊ မျက်နှာကြက်ဖြူဖြူ) ထဲကိုရောက်ပြီး တစ်ပတ်လောက်နေတော့ သူသိလိုက်တယ်။ ဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပ ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ဆက်သွယ်ရန်မလိုအပ်တော့သော အခြေအနေတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိနေခြင်းပဲဆိုတာ...။
ဘေးကသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လောက်ရီရင် ဘာမှန်းညာမှန်းမသိ ရောယောင်ရီတတ်တဲ့ ဆယ်ကျော်သက် လူပျိုပေါက်တစ်ယောက်လို သူ ခပ်ကြောင်ကြောင် တွေးတယ်။ နားကြပ်နဲ့ ကုတ်အဖြူဝတ်ထားတဲ့လူကြီးက သူ့ကိုပြုံးကြည့်ရင်း မကြာခင်ကောင်းသွားမှာပါ ပြောတယ်။ ဘယ်လောက်ကျလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုမမေးဖြစ်အောင် လျှာနဲ့လိပ်သိမ်းလိုက်ရတယ်။ ဖြစ်နိုင်ရင် ဆရာမကြီးကိုရော ကုတ်အဖြူနဲ့လူကြီးကိုရော ရွှေရောင်တ၀င်းဝင်းနဲ့ သူ့စပါးခင်းကြီးထဲ လက်ဆွဲပြီးခေါ်သွားချင်တယ်။ ထမင်းအနပ်တိုင်းမှာ ရင်ငွေ့နဲ့အာငွေ့နဲ့၊ ပိတ်ရက်မရှိ ၂၄နာရီ မိဘမေတ္တာထမင်းဆိုင်က သူ့ကို စားလိုတဲ့ဟင်းလျာစာရင်းတွေ မေးလို့ပေါ့။
ဟိုင်း- နေကောင်းလား။ စိတ်ကူးယဉ်တာ လက်တွေ့လောက်မကောင်းပါဘူး။ ဘိုင် ဆိုတော့ အားဖြင့်ပေါ့။ be happy
တစ္ဆေအကိုက်ခံရတဲ့သူဟာ တစ္ဆေအကိုက်ခံရတာကို ကျေနပ်မနေဖို့တော့ လိုတာပေါ့။
၀ုန်းဆို စပါးခင်းကြီးပေါ် နံရံဖြူဖြူက ပြန်ပိကျသွားတယ်။
ဘာ ဆက် ဖြစ် မှာ လဲ... ဘာ ဆက် ဖြစ် မှာ လဲ။ ဘာမှမရှိတဲ့ နံရံဖြူဖြူကိုကြည့်ပြီး ဘာမှန်းမသိတဲ့စာလုံးတွေကို တတွတ်တွတ်ပြန်ရွတ်ပေါ့။ ဒါပဲရှိတာပေါ့။ ဒါပဲ ရှိတာပေါ့။ ပျင်းလို့ဝှက်တဲ့စကားထာဆိုမှတော့ ပျော်စရာမကောင်းဘူးပေါ့။
သူ့စိတ်ကို အရင်းအတိုင်းလှန်ချလိုက်တော့ မိုက်မဲနုံချာကျဉ်းမြောင်း။ အာခေါင်ထဲ အရက်လောင်းချလိုက်တဲ့အခါ ကမ္ဘာကိုထမ်းပြီး ပြန်လာမယ်တဲ့။ ဟေးးသူကောင်းသားလေ။ အာခေါင်ထဲ ဘာအရည်မှလောင်းမထည့်ဘဲ ပြန်လာခဲ့။ ကမ္ဘာကိုလည်း ထမ်းလာဖို့မလိုဘူး။ မင်းကိုမင်းထမ်းလာရင် တော်ပြီ။
သူပြန်လာမယ်တဲ့။ ပျင်းလို့ဝှက်တဲ့ စကားထာလေးတစ်ပုဒ်နဲ့။
NO ပါ။ စကားထာအဖြေက အမှားကြီး။
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မယ် မြင်ပင်လေးတစ်ပင် လှုပ်ယိမ်းသွားတာကအစ အကြောင်းမဲ့တော့ မဟုတ်ခဲ့ဘူး။
Posted by ညိမ်းညို at 12:036comments
လူတွေရဲ့ စိတ်နှလုံးကို ကြည်နူးရွှင်လန်းစေနိုင်တယ်
ကိုယ့်အနီးမှာ ရှိခဲ့ဖူးလို့ပေါ့ ..
မင်းရဲ့ အကြင်နာတွေ၊ မေတ္တာတရားတွေ
-ပို့စကဒ်တစ်ခုက ရုရှကဗျာတစ်ပိုဒ်ကို မှီးပါတယ်။ ရေးသူအမည် မတွေ့ရပါ။
Posted by ညိမ်းညို at 17:096comments
Posted by ညိမ်းညို at 01:307comments
Posted by ညိမ်းညို at 10:23 8 comments
Posted by ညိမ်းညို at 19:223comments
မှန်တယ် မတုတ် မာလာတယော
ကြောက် လွဲ၊ ရဲ မင်းဖြစ် ပေကညစ်က လာတာချည်းပဲ
ဒေ၀က ခြောက်ရာ့သုံးဆယ်(630) တဲ့
Posted by ညိမ်းညို at 12:21 14 comments
- ၃၀၊ ၈၊ ၂၀၀၇ တုန်းက တစ်ခါတင်ဖူးတဲ့ ကဗျာဟောင်းတစ်ပုဒ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 23:53 12 comments
နေရောင်ခြည်ကို မစို့မပို့လေး မျှင်းသောက်ရုံနဲ့
အပင်ငယ်လေးတွေ ကျိုးတိုးကျဲတဲ အဖော်ပြုလာ
Posted by ညိမ်းညို at 00:42 17 comments
မင်းကြင်နာမှုလေး ‘ကျိုး’ သွားမှာကြောက်လို့
ဆေးလိပ်ကို ကိုယ် ‘ချိုး’ ခဲ့ပါတယ်။
မင်းသံယောဇဉ်လေး ‘ကွဲ’ သွားမှာကြောက်လို့
အရက်ခွက်ကို ကိုယ် ‘ခွဲ’ ခဲ့ပါတယ်။
မင်းယုံကြည်မှုတွေ ‘ကြေပျက်’ သွားမှာကြောက်လို့
စရိုက်ဆိုးတွေကို ကိုယ် ‘ချေဖျက်’ ခဲ့ပါတယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 08:21 16 comments
"အဖေရေ . . .
ကမ္ဘာကျော်မြေပိုင်ရှင် . . . မရှိဘူး
ကမ္ဘာကျော်တိုင်းမင်းကြီး . . . မရှိဘူး
ကမ္ဘာကျော် စာရေးဆရာ ၊ ကဗျာဆရာရှိတယ်
မဟေသီမဂ္ဂဇင်း၊ ၁၉၉၅၊ ဖေဖော်ဝါရီမှ
ဒါပေမဲ့ ဦးကြီးဦးလေးတစ်ယောက်လို သဘောထားမိတယ်
ဆရာချောကို ချစ်တဲ့အချစ်အတွက် ကျွန်တော့်မှာ အဖြေမရှိဘူး
ဆရာချောရဲ့ကဗျာတွေကို ချစ်တဲ့အချစ်အတွက် ကျွန်တော့်မှာ အဖြေမရှိဘူး
အပရည်ရွယ်ချက်များ ကင်းရှင်းစွာ ဆိုပါတယ်
ကျွန်တော့်ရဲ့ ကဗျာနတ်ဘုရား ဆရာချောကို လွမ်းလွမ်းဆွတ်ဆွတ် အောက်မေ့မိပါတယ်။
ဒီကနေ့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ တစ်ဝက်လွှင့်ထူထားပါတယ်။
Posted by ညိမ်းညို at 00:026comments
"ဖြစ်ကို ဖြစ်ရမယ်" ရည်မှန်းချက်ရှိရတယ်ဆိုရင်
"ဖြစ်ကို မဖြစ်ရဘူး" ရည်မှန်းချက်လည်း ရှိကောင်းရဲ့
ဖြစ်ကိုမဖြစ်ရဘူး ရည်မှန်းချက်ဟာ ငှက်ခတ်သမား
ငှက်တွေကို မဖြားယောင်းလိုဘူး ငှက်တွေကို မသွေးဆောင်လိုဘူး
Posted by ညိမ်းညို at 11:159comments
၂၅နှစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ လူငယ်စိတ်နဲ့ ရဲရင့်မှု
၅၂ နှစ်သားတစ်ယောက်ရဲ့ ရင့်ကျက်မှုမျိုး လာမတောင်းနဲ့
ခင်ဗျား အတုကြီးပဲ ရသွားမယ်
Posted by ညိမ်းညို at 21:365comments
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြိတ်စက်ထဲထည့်ပြီး မချိမဆန့် ညှစ်ချကြည့်လိုက်ချင်တယ်
ကဗျာကို ဒီထက်ပိုကောင်းအောင် မရေးနိုင်တော့ဘူးလား
ငါ့ဦးနှောက် ငါ့နှလုံးသား ငါ့လက်တွေ
Posted by ညိမ်းညို at 13:239comments
သူငယ်ချင်းလူဝကြီးများက ငါ့ကို မသနားဖို့
ငါတို့ သူငယ်ချင်းတွေ လွင့်စင်သွားရပုံ
တစ်ချို့ ချုံပုတ်ထဲက ကုန်းရုန်းထလာကြ
တစ်ချို့ ချောက်ကမ်းပါးထဲက တွယ်တက်လာကြ
တစ်ချို့ အခြားသောလမ်းတွေက ပြန်ပေါ်လာကြ
တစ်ချို့ တောင်ထိပ်ပေါ် အလိုလိုရောက်သွားကြ
ငါက တစ်ဘ၀စာဖျက်မရတဲ့ အမှတ်အသားတစ်ခုကို ပေကျံစေခဲ့တာလား
တစ်သက်တာအလိုမပြည့်နိုင်မှုနဲ့ ချစ်မြတ်နိုးဖွယ်ဇနီးမယားလေးကို ခိုးယူပေါင်းသင်းခဲ့တာလား
ကဗျာကိုဆေးမင်ရည်စုတ်ထိုးလို့ သူ့အပေါ် အပိုးကျိုးခဲ့လေတယ်။
ဒီမယ်... ဒီမယ် တဲ့ ကြွေသွားတဲ့သစ်ရွက်တွေက ပုခုံးလာလာပုတ်ကြ
အဟတ်ဟတ် ဂျိုက်ထောက်ထားတဲ့ ကဗျာဘီးကို အခုထိမလဲနိုင်သေးတာကြည့်တော့
ဒင်းကလဲ ရပ်ရင်းတောင် အလိုလိုတွန်းကန်တက်ကြွနေပုံများ
ငါ့မှာ ကားအစုတ်ကြီးကိုတောင် နတ်ရထားလားဘာလား စိတ်ကြီးတွေဝင်
သူငယ်ချင်းလူဝကြီးများက ငါ့ကို မသနားဖို့။
Posted by ညိမ်းညို at 00:265comments
အောင်မြင်မှုဆိုတာ ထုပ်တန်းကနေ ကြိုးနဲ့တွဲလောင်းဆွဲထားတဲ့ ထန်းလျက်ခဲတစ်ခဲပါကွာ
ညှော်နံ့မသင်းအောင်တော့ ကိုယ့်မီးစာကိုယ် ပြန်မြိုထားကြတာပေါ့
ငါတို့လည်း လောကဓံကြိုးဝိုင်းထဲက ကံကြမ္မာနဲ့ထိုးသတ်နေရတဲ့
ခေါင်းပေါ်ကထန်းလျက်ခဲကြီး မော့မော့ကြည့်ပြီး အချိန်တိုင်းကန်ကျောက်နေကြတာပဲ မဟုတ်လား
ဘောလုံးကန်တာ လူကိုမကန်မိဖို့တော့ လိုတာပေါ့ကွာ။
Posted by ညိမ်းညို at 06:49 12 comments
Posted by ညိမ်းညို at 12:03 8 comments
Posted by ညိမ်းညို at 00:03 12 comments
Posted by ညိမ်းညို at 17:19 14 comments
ခရစ်စမတ်ဟာ န-နာရီ ခရစ်စမတ်ဟာ စမျဉ်း ငါစင်းစင်းကြီး...
ကျနော်ဟာ ရူးသွပ်စွာ(သို့) မိုက်မဲစွာ အစွဲအလမ်းငရဲမ...